युवराज खतिवडा – ताजा समाचार
ताजा समाचार । १५ फाल्गुन काठमाडौं : सरकारले पेट्रोल र डिजेल विकास कर बढाएको छ। बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्लेनमा सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन्। फागु १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिजेल र पेट्रोलमा लगाइँदै आएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ विकास करलाई बढाएर १० रुपैयाँ बनाएको हो। सूचना तथा […]
सरकारको प्रवक्तामा डा. खतिवडा नियुक्त
काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारको प्रवक्तामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी लेनदेन बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएपछि गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी खतिवडाले पाएका हुन् । सो जिम्मेवारीपछि उनले […]
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उनले सम्हालेको सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्हाल्ने जानकारी गराएको छ ।त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी वसन्त नेम्वाङलाई दिएका छन्। वसन्त नेम्वाङले अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी […]
विद्युतीय भुक्तानी गरे भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने नियम कार्यान्वयन
विद्युतीय भुक्तानी गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत तिरेको मध्ये १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाइने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी अर्थात् डिजिटल पेमेण्ट गर्ने क्रम बढाउन सरकारले यस्तो निमय लागू गरेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ता कार्यान्वनयको शुभारम्भ गर्नुभयो । अब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्डका […]
काठमाडाैं । गत शुक्राबार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा ‘यो पटक २ वर्षे अवधि पूरा गरेका कसैलाई पनि नदोहो-याउने, मापदण्ड बनाइयो । त्यो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः संसद हुनबाट सदाका लागि पन्छाउने रणनीति बमोजिम आएको थियो । अब राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने कोटामा पनि खतिवडा नपर्ने पक्का भयो । गत वर्ष अर्थमन्त्रीको सर्वाधिक आलोचना हुँदा खतिवडाले […]
बैंकले ऋण नदिए मलाई इमेल गर्नुस, कारबाही गर्छु : मन्त्री खतिवडा
काठमाडौं। अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्वरोजगार बन्नका लागि बैंकले ऋण नदिए आफूलाई खबर गर्न आग्रह गरेका छन् । सहुलियत कर्जाको माध्यमबाट युवा उद्यमशीलता र प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय युवा परिषद् र ३ वटा सरकारी बैंकहरुबीच सहकार्य गर्न काठमाण्डौको एक होटलमा भएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री खतिवडाले देशभित्रै काम गर्न खोज्ने युवाहरुलाई राज्यले संरक्षण र सहयोग […]
काठमाडौं : पुँजी बजार धराशायी हुनै लाग्दा सरकार र नियामक निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् । बजारमा दिनहुँ लगानीकर्ताले खरबौं रुपैयाँ गुमाइरहेका छन् । तर उनीहरु केही पनि थाहा नभएजस्तो गरी बसिरहेका छन् । दिनुहँ दोहोरो अंकले बजार घट्दा आम लगानीकर्ताको आत्मबल गिरेको गिर्यै छ । सरकार, विशेषगरी, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रमिता हेरेर बसेका […]